Shikhar Post » मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयः गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनदेखि सचिव हेरफेरसम्म
मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयः गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनदेखि सचिव हेरफेरसम्म
काठमाडौँ, ९ साउन । युवा रोजगारीको लागि रूपान्तरण पहल परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ऋण सहायताका रूपमा प्रस्तावित १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रू. १३ अर्व) स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यही साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनदेखि सचिब हेरफेरसम्मका निर्णयहरु गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सार्वजिक गरेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख निर्णयहरू यस्ता छन्ः
१२. बर्दगोरिया ४००१३२ के.भी सबस्टेशन (कैलाली) का लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।